Linear Ọkụ Ọrụ - Imewe Mmewe
Ọkụ Ọrụ A na - ejikarị usoro ikuku nke Linear Light emepụta akụkụ nke ụgbọala. A na-ahụta ahịrị oghere nke mmiri site na njikwa ziri ezi nke ndị na-emepụta Taiwanese, yabụ nwee obere ihe iji wuo ọkụ dị mfe, ike, ma nwee ike; ezigbo ka ọkụ n’ime ụlọ ọgbara ọhụrụ. Ọ na-emetụta mmetụ mkpụrụedemede na-enweghị mmịpụta friji, yana ọrụ ebe nchekwa nke na-agbanye olu olu aga aga. Ezubere Linea Task Linear site na onye ọrụ iji kpokọta ya n'ụzọ dị mfe, nke ihe ndị na-adịghị egbu egbu na-abịa, ya na ngwongwo dị larịị; na-eme ike ya niile iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi.
Aha oru ngo : Linear, Aha ndị na-emepụta ya : Ray Teng Pai, Aha onye ahịa : Singular Concept, RAY.
Ọkụ Ọrụ Ray Teng Pai Linear